Apple ကုမ္ပဏီမှ 2019 တွင် ကားများစတင်ထုတ်လုပ်မည် | CarsDB
Shop CarsDB Club
2017 CIF Search
Apple ကုမ္ပဏီမှ 2019 တွင် ကားများစတင်ထုတ်လုပ်မည်
Apple ကုမ္ပဏီမှ လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ရန် စတင်ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပြီး 2019 ခုနှစ်တွင် လမ်းပေါ်၌ Apple ကုမ္ပဏီထုတ်ကားများ စတင်မောင်းနှင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သတင်းတစ်ခုက ဆိုပါတယ်.။
Wall Street Journal ၏ သတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုတွင် Apple ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယခုလက်ရှိ လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်မှု project တွင် ဝန်ထမ်း 600 ကျော်ခန့်အပ်ထားပြီး ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းအင်အားကို (၃) ဆအထိ တိုးမြှင့်ခန့်ထားဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်.။ Apple မှ ထုတ်လုပ်မယ့် ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Project ကို “Project Titan” ဟု အမည်ပေးထားပြီး Google မှ ထုတ်လုပ်မယ့် အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ကားအမျိုးအစား မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်ကားအမျိုးအစားသာဖြစ်ကြောင်း WSJ က ဆိုပါတယ်.။
ကားလောကအတွင်း Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ ခြေလှမ်းသစ်ချဲ့ထွင်မှုဟာ ကားလောကကို အနည်းငယ်လှုပ်ခတ်သွားစေနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် Tesla Motors ကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီများကို ကာလကြာရှည်စွာ ခြိမ်းခြောက်နိုင်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြပါတယ်.။
Apple ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ကားထုတ်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေခဲ့တာ အချိန်ကာလတစ်ခုရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး Project ရဲ့ အရွယ်အစားကို ပိုမိုချဲ့ထွင်ခြင်း၊ California ပြည်နယ် အာဏာပိုင်များနဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကားစမ်းသပ်မောင်းနှင်နိုင်မယ့် မြေနေရာများ ငှားရမ်းခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပြီးကြောင်းလဲ သိရပါတယ်.။
Written by: အောင်မွန်ချမ်း
Ref: Wall Street Journal
Apple ကုမ်ပဏီမှ လြှပျစဈကားထုတျလုပျမှုကို အရှိနျမွှငျ့တငျရနျ စတငျကွိုးပမျးနပွေီဖွဈပွီး 2019 ခုနှဈတှငျ လမျးပျေါ၌ Apple ကုမ်ပဏီထုတျကားမြား စတငျမောငျးနှငျနိုငျရနျ ရညျရှယျထားကွောငျး သတငျးတဈခုက ဆိုပါတယျ.။
Wall Street Journal ၏ သတငျးပေးပို့ခကျြတဈခုတှငျ Apple ကုမ်ပဏီအနဖွေငျ့ ယခုလကျရှိ လြှပျစဈကားထုတျလုပျမှု project တှငျ ဝနျထမျး 600 ကြျောခနျ့အပျထားပွီး ဖွဈပွီး ဝနျထမျးအငျအားကို (၃) ဆအထိ တိုးမွှငျ့ခနျ့ထားဖို့ လုပျဆောငျနကွေောငျး ဖျောပွထားပါတယျ.။ Apple မှ ထုတျလုပျမယျ့ ကားနဲ့ပတျသကျတဲ့ Project ကို “Project Titan” ဟု အမညျပေးထားပွီး Google မှ ထုတျလုပျမယျ့ အလိုအလြောကျမောငျးနှငျနိုငျတဲ့ ကားအမြိုးအစား မဟုတျဘဲ လြှပျစဈကားအမြိုးအစားသာဖွဈကွောငျး WSJ က ဆိုပါတယျ.။
ကားလောကအတှငျး Apple ကုမ်ပဏီရဲ့ ခွလှေမျးသဈခြဲ့ထှငျမှုဟာ ကားလောကကို အနညျးငယျလှုပျခတျသှားစနေိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ Tesla Motors ကဲ့သို့ ကုမ်ပဏီမြားကို ကာလကွာရှညျစှာ ခွိမျးခွောကျနိုငျမှာတော့ မဟုတျဘူးလို့ လလေ့ာသူမြားက သုံးသပျကွပါတယျ.။
Apple ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ ကားထုတျလုပျဖို့ စဉျးစားနခေဲ့တာ အခြိနျကာလတဈခုရှိသှားပွီဖွဈပွီး Project ရဲ့ အရှယျအစားကို ပိုမိုခြဲ့ထှငျခွငျး၊ California ပွညျနယျ အာဏာပိုငျမြားနဲ့ ဆှေးနှေးခွငျး၊ ကားစမျးသပျမောငျးနှငျနိုငျမယျ့ မွနေရောမြား ငှားရမျးခွငျး အစရှိတဲ့ လုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျနခေဲ့ပွီးကွောငျးလဲ သိရပါတယျ.။
Written by: အောငျမှနျခမျြး
Posted at: 23-09-2015 06:43 AM
CarsDB.com is the number one online classifieds cars listing site for Myanmar car market. We provide the best online advertising services for car buyers, sellers, agents, dealers, showrooms and importers.Buying cars or selling cars has never been easier. Buy from car showrooms, car dealers and direct owners at CarsDB.com. You can find any cars like Sedan , Sports car , Hybrid car, Hatchback , Stationwagon , SUV , Bus , Truck , Toyota , Honda , Mazda , Nissan , Mitsubishi , BMW , Audi , Kia , Hyundai , or Mercedes-Benz .
PAKWHEELS.COM | ANGOLACARRO.COM
ENCUENTRA24.COM | KUPATANA.COM |